သင်ဒီမှာပါ: Home / ကြီးထွားလာ Solutions / အဘယ်အရာကိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန် / ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ / ကညွှတ် / ကညွတ် - တိုက်စားမှုလေနှင့် Cool မိုးလေဝသသည်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောသီးနှံ
Gee! 1984: ဒီအဟောင်းသတင်းပါ! တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်ဖို့စိုက်ပျိုးခြင်း aparagus နေဆဲခိုင်လုံသောဖြေရှင်းချက်ပါ!
အရာခဲ 25 ° C မှအားလုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်း 15 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်ပီတိအေးမြသောညကျော်လွန်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း: သူတို့ကစိန်ခေါ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ကြောင်းညွတ်၏တစ်ဦးတည်းသာအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းပဲ!